Apps u Nadiifinta iPhone Photos
Ma leedahay tiro aad u badan oo ah sawiro aan loo baahnayn in aad iPhone ee Camera Roll, in yar kaga qaadato ilaa aad meel qaali ah? Ma waxaad doonaysaa hab ay si dhakhso ah u tirtirto boqolaal sawirada, oo aan haysan si ay u doortaan mid ka mid ah? Aad Lucky! Waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Waxaan soo bandhigi doonaa inaad hogaanka 10-ada nadiifinta iPhone Photos.
Maskaxda ku hay in barnaamijyadooda, haddii aanu ka tirtirto sawiro aad si joogto ah. Waxay si fudud u dhig galka Dhawaan masaxay. Sawiradaas waxaa loo toos ah la tirtiro doonaa 30 maalmood ka dib, ama waxaad aadi kartaa galka Dhawaan tirtiray iyo iyaga gacanta tirtirto.
Eeg 10-ada sare ee nadaafadda aad sawiro iPhone si fudud.
Haddii aad raadinayso si ay u tirtirto tiro badan oo sawiro la weeraray, markaa Purrge waa app qummanna waad u. Iyo haa tahay, aad akhriday waxa uu xaq u leeyahay. Waxaad tirtiri kartaa tiro ballaaran ee photos la weeraray. Si fudud, mari guud ahaan saf ah sawirrada aan loo baahnayn. Qaabkan waxaad iyaga soo xuli doona. Marka sawirada lagu doorto Purrge tuubada in mar oo dhan laga takhaluso iyaga ka mid ah. Haddii aadan hubin in ama aan haysan aad dooratay sawirka saxda ah, oo aad u isticmaali karaan, waxayna u arkaan in shaashad buuxda ka hor inta aan la tirtiro. Markaas sawirka kor mari in aad ku darto si raso Purrge ah.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/purrge/id944628930?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Photos 2.Delete - Nadiifinta aad album
Delete IWhat photos - Nadiifinta aad album kuu sameeyey waa in ay abaabushaa sawiro aad. App waxay abaabushaa sawirada taariikhda, size ama haddii tus ka jiraan. Sidoo kale, tirada PIC kasta ayaa la soo bandhigay. Marka aan sidaa yeelno, app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud oo sawiro soo qaato oo meel ugu, oo markaas waxaad iyaga ku baabiin karta arko. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka kuwa qaadataa darbo badan oo ka mid ah goobta, si aad u dooran kartaa sawirka ugu fiican ka dib, app tani tahay doorashada ugu fiican aad u. Photos waxaa si fudud isugu keenaa, oo aad si fudud u heli iyo tirtirto tus ah.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/delete-photos-cleanup-your/id926090192?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
3.Cleen - Nadiifinta Photo Library
Cleen waa mid ka mid ah codsiga noocan ah. Ka sokow awoodda ay leedahay in ay tirtirto sawiro aad, aad iyaga ku dari kartaa inay ugu cadcad. Haddii aad hoos mari sawirka waxa laga tirtirayaa. Haddii aad u mari waa in la wada dari doonaa si aad Favorites folder. Haddii aad tahay waxa la sameeyo leh sawirka hubin, weerar dadban ku tagay si aad u la danbe ka qaban karin. Qaabkan waxaad si deg deg ah ku arki kartaa sawirada oo aad samayn sida ugu, iyo tirtirto kuwa aan loo baahnayn la weeraray. Marka aad ka jaftaa qashinka aad si fudud ku eegaan karin dhammaan sawiro aad rabto in aad la tirtiro.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/cleen-clean-up-photo-library/id926163661?mt=8%20&ign-mpt=uo%3D4
Haddii aanad isticmaalin ugu cadcad ciyaari aad Camera Roll, ka dibna aad rabto laga yaabaa in uu u bedelo Cleen la Flic. Cirib leeyahay awood la mid ah sida Cleen. Swip hal dhinac in ay tirtirto sawirka, iyo in kale si uu u. Iyadoo codsigan aad ku arki kartaa sawirka kasta oo aad weligaa qaaday. By kabacdi tagay aad uga takhalusi karaa sanam, iyo kabacdi xaq waxaad dooran kartaa in ay sii image ah. Sidoo kale, la Flic waxa aad awoodi kartaa in ay doortaan image bil oo u soo dir hal mar oo dhan qashinka.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/flic-delete-manage-camera/id918263212?mt=8%20&ign-mpt=uo%3D4
Dadka qaar ayaa sheegaya in waqtiga waa wax walba. Haddii aad ku faraxsantahay waqtiga wanaagsan, ka dibna aad ku faraxsantahay doonaa Jumlada aad Delete. Jumlada Delete waa app ah oo awood u tirtirtaa waqtiga ku salaysan. Iyadoo app waxa aad ka arki kartaa sawirada ka saac ee la soo dhaafay, maalin, todobaadkii, bishii, ama si fudud u tirtirto tiirarkii oo dhan hal mar. Sidoo kale, kulanka xiisaha leh thumbnail sawirada waxaa laga heli karaa. By jiiday labada farood ee guud ahaan aad screen, waxa aad awoodi kartaa in ay doortaan images badan. Markaas, u soo dir hal mar oo dhan la mid click fudud qashinka ah. Haddii farabadan ee photos jir ama tashwiish ku dhibto, ka dibna si fudud aad iyaga saari karin maktabadda la cajiibka ah app.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/bulk-delete-clean-up-your/id927668706?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Photos Coobbi waa dhan oo ku saabsan size image ka. App Tani reorganizes dhan ah sawirada aad by ay size. Sidaas waxa aad ka arki kartaa sawirada qaato oo badan oo aad boos iyo tirtirto kuwa aan loo baahnayn. Photos Coobbi sidoo kale muujinaysa faahfaahin kugu saabsan ee photos, sida dhinacyada, DPI, model midabka, si qoto dheer, height pixel iyo width, oo xitaa ka sii badan. Waxaad dooran kartaa oo dhan images mar, ama shaqsi ka jaftaa sawirada tarin. Ka dib markii doorashada sawirada oo kor loo qaado wax badan oo aad boos, ka dhacay badhanka delete in laga takhaluso iyaga.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/photos-cleaner-free-delete/id926723334?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
7.Sweep - Samee Space aad Phone
Xaaq - Samee Space aad Phone waa app ah oo higsanaya in uu aad sawiro nuqul. Waa maxay app waxan sameeyo waa in helo sawiro in la geeyay qiyaastii waqti isku mid, ka dibna u soo bandhigay sawirada kuwa aad u. Haddii aad u malaynayso in sawiro la mid ah, ama xitaa isku mid yihiin, oo aad iyaga u tirtiri kartaa. Waad haysan kartaa sanamyada aad u malaynayso ma aha tus. App Tani ayaa sidoo kale ka shaqeeya by kabacdi. Waxaad weerar dadban ku tegi karaa si loo badbaadiyo xaq sawir ama dadban ay u tirtirto ah. Markaas, si fudud u dhaqaaqo Dufcaddii xiga ee sawirro la mid ah.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/sweep-make-space-on-your-phone/id918964448?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Haddii aad ugu jeceshahay ama tirtirto qofka sawirada, markaas Slidy waa app kale oo weyn oo aad u. Jecel ama tirtirto sawiro by iyaga saraysa kor ama hoos. Waa in si sahlan, oo aynu u wajihi. Waxaad sida sawirka ama aan. Sida oo dhan barnaamijyadooda kale, app this soo diri doonaa dhammaan sawiro aad la tirtiro si folder aad dhawaan la tirtiro. Waa in aad tirtirto sawirada si joogto ah gacanta.
Pro Slidy waa ficil ku noolyihiin tan iyo markii ay leedahay cayayaanka ah taas oo ka dhigaysa shil app. Halkii, shirtagi version xorta ah ee app.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/slidy-most-effective-way-to/id933159483?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
In uu furmo suuqa ugu weyn, guji soo kabsado Lugood ee kaabta File . Markaas uu furmo, macruufka oo dhan 9 iPhone, iPad, iPod iyo taabashada Lugood gurmad faylasha lagu soo bandhigi doonaa. Dooro mid ka mid ah ugu danbeeyay oo ay ku jiraan arrimo aad u 9 badiyay xogta iyo riix Start Scan si ha barnaamijka Macdan ku jira oo dhan in this Lugood gurmad file.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/screeny-delete-screenshots/id941121450?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Mararka qaarkood, waxaad kaliya qaadataan xidhmo ah snapshots si aad iyaga aad saaxiibada ka dib tusin karnaa. Oo iyagu ha wajahno, sawiro, kuwaas oo aan qaar ka mid ah sawirrada oo tayo sare leh, laakiin aad ogtahay qof jeclaan lahaa inay arkaan. Waa maxay SnapTill sameeya aad tahay waxa ay kuu ogolaanayaa inaad si ay u dejiyaan waqtiga xadidan ee sawiradan. Waxaad dooran kartaa sida aad rabto in aad muddo dheer sawirada kuwaas oo Shalay inay Dhahaan telefoonka. Waxaad dajiyaan karaa tiirarkii ka camera kitaabkii duudduubnaa ama sawiro la app ka qaadan, ka hor inta xulashada 'taariikhda dhicitaanka'. App Tani waa qumman yahay, maxaa yeelay waxa ay ka saaraysaa sawiro aad si buuxda illoobay ku saabsan.
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/snaptill/id887080245?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Sida loo dhoofiyo Faylal ay kaabta ka iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s
> Resource > iPhone > 10 Apps u Nadiifinta iPhone Photos